Warsaxaafadeed ku saabsan kulankii golaha wasiirada DFKMg ah ee maanta 5-ta June – SBC
Warsaxaafadeed ku saabsan kulankii golaha wasiirada DFKMg ah ee maanta 5-ta June
Posted by editor on June 5, 2011 Comments
Shir ay maanta golaha wasiirada yeesheen oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Somalia Mudane Mohamed Abdullahi Mohamed (Farmaajo) ayaa looga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid ahaayeen.
Warbixin arrimaha amniga ah oo laga dhageystay Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Gaaashandhiga Mudane Abdirashid Hidig ee la xiriirtay safarkiisii shaqo ee uu ku tegey gobolada Gedo iyo Jubbooyinka. Sidoo kale Golaha Wasiirada waxey warbixin ka dhageysteen Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed iyo Abaanduulaha Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed oo Golaha siiyey warbixin la xiriirta howlgaladda lagu sugayo amniga ee ka socda dalka, gaar ahaan kuw Muqdisho oo ay ciidamadu guulo is-daba jog ah maalmahan ka gaareen oo ay la wareegeen goobo cusub oo ay Al-Shabaab saldhig u ahaayeen, sida Degmooyinka Hodan iyo Boondheere.
Wasiirka Maaliyadda Mudane Hussein Abdi Halane ayaa golaha soo hordhigay hindise sharciyeed ku wajahan hay’adaha Maaliyadda ee Somalia. Sharcigan cusub ayaa lagu wadaa inuu nidaamiyo nidaamka dhaqaalaha dalka, gaar ahaan ka ganacsiga lacagta sida Xawaaladaha iyo sarifka lacagaha qalaad ama bankiyada sida gaarka ah loo leeyahay.
Bacdamaa labaatankii sano ee u danbeysay ay soo ifbaxeen habab cusub oo loo maamulo lacagaha, isla markaana sharcigii hore ee dalku lahaan jirin uusan la jaanqaadi karin, ayaa lagu wadaa sharcigan cusub inuu wax weyn ka tari doono nidaaminta dhaqaalaha iyo lacagaha dalka.
Sharicigan waxaa loogu oggolaan doonaa Ruqso siinta, Nidaaminta, Kormeerka iyo Maareynta shaqada hay’adaha qabanaya, Keydka, dhigaalka iyo macaamilaadka maaliyadeed ee dadweynaha. Golaha wasaarada ayaa ansixiyey hindise sharciyeedkan oo dhowaan la hor geyn doono baarlamaanka si ay uga doodaan, isla markaana u ansixiyaan oo uu uga dhaqan galo dalka.
Ra’iisul Wasaaraha Somalia Mudane Mohamed Abdullahi Mohamed (Farmaajo) ayaa intii uu socday shirka kormeer shaqo ku tegey qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho oo uu xariga ka jaray waddada isku xirta Afisiyooni iyo Suuqa Ceelgaab oo in muddo ahba xirneed ka dib markii halkaas ay ciid fara badan xirtey wadada. Maamulka Gobolka ayaa ciidii ka qaaday wadada oo suurtogeliyey in wadadaas ay dib u furanto.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa halkaas khudbad ka jeediyey oo ay xafladaas isu soo baxeen shacabka degmooyinka Waaberi iyo Xamar JeJab.
Ra’iisul wasaaraha ayaa gacan qaaday shacabkii halkaas isagu soo baxay oo muujinayey dareenkooda ku aadan sida ay ula dhacsanyihiin Xukuumadda iyo dadaalada ay ka wado adeegyada bulshada.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa u mahadceliyey shacabkii ka soo qeybgalay oo u soo banaanbaxay xafladdan.
Sidoo kale waxaa goobta xafladda ka hadlay Guddoomiyaha Gobolka Banadir Mudane Mohamud Ahmed Nur (Tarzan) oo uga mahadceliyey Ra’iisul Wasaaraha sida uu shacabka soomaaliyeed u soo dhexgalay. Ra’iisul Wasaaraha ayaa markii uu ku soo laabtay golaha warbixin ka siiyey xafladda golaha Wasiirada.